प्रचण्ड ‘फिलिङ’ कार्यकारी अध्यक्ष – " सुलभ खबर "
प्रचण्ड ‘फिलिङ’ कार्यकारी अध्यक्ष
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच लिखित सहमति भएर काम ‘बाँडफाट’ भएको एक साता भयो। यो एक हप्तामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै खुसी देखिएका छन्। अनुहारमा मुस्कान र बोलीमा तेज बढेको छ।
पछिल्लो हप्ता प्रचण्डको व्यस्तता, बोली, हाउभाउ र हाँसोमा कार्यकारी अध्यक्षको ‘फिलिङ’ प्रचूर देखिएको छ।
उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्- बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको ‘फिल’ भएको छ।
यो ‘फिलिङ’ प्रचण्डका लागि त राम्रो छँदैछ, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा र मुलुकका लागि पनि हितकर छ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सुलह नहुँदा नेकपालाई अन्यौलग्रस्त बनाउँथ्यो। त्यसले सरकार र राजनीतिमै अस्थिरताको ‘फिलिङ’ दिन्थ्यो। दुई-तिहाइको सरकार बनेपछि विकास र सुशासनमा चाहिने सत्तासीन नेताहरूको एकाग्रहता बिथोलिरहन्थ्यो।
दुई नेताबीचको सहमति र त्यसको अन्तर्य बुझ्ने र बुझाउनेमा भने ठूलो ‘ग्याप’ देखिएको छ। सहमति एउटा छ, त्यसको व्याख्या अर्कै। जसले बुझेको छ, ऊ सार्वजनिक रूपमा धेरै बोलिरहेको छैन। जसले बुझेको छैन, सार्वजनिक रूपमा उसले धेरै व्याख्या गरिरहेको छ।
सहमतिको अन्तर्य बुझ्ने र बुझाउनेमा मिडियाको पनि कमजोरी देखिएको छ। शीतल निवासबाट फर्किएर दुई नेताबीच भएको सहमति मिडियामा पहिलोपटक चुहिँदा ‘अब प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने’ भनेर बाहिर आयो।
जब दुई नेताको लिखित सहमति हाम्रो हात पर्‍यो, सहमतिको सार त्यो थिएन। हामीले सेतोपाटीमा सहमति प्रतिविम्बित हुने गरी समचार सच्यायौं। धेरै मिडियामा भोलिपल्ट पनि त्यही ‘टाइटल’मा समाचार आए।
अध्यक्षद्वय कमरेड केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वरीयताक्रम यथावत रहने।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैले पछिल्ला केही दिनमा यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रष्ट भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘फायरसाइड’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफू अहिले पनि पार्टीको वरिष्ठ अध्यक्ष रहेको र चाहेका बेला पार्टी बैठकको अध्यक्षता आफैंले गर्ने बताएका हुन्।
उनले भनेका थिए, ‘मैले अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन, कार्यकारी अध्यक्ष होइन भन्ने हैन। म पनि कार्यकारी अध्यक्ष नै हो। र म सिनियर अध्यक्ष हो। म सिनिरियटीमा प्रथम अध्यक्ष हो, उहाँ अर्को।…कहिलेकाँही म पनि पार्टी अध्यक्षता गर्छु।’
त्यो एउटा ‘फिलिङ’ हो, यो फिलिङका साथ उनी पछिल्लो सातादेखि काम गरिरहेका छन्।
त्यो ‘फिलिङ’ मात्र हो भन्ने ओली-प्रचण्डबीच पार्टी एकीकरण हुँदा भएको पाँच बुँदे सहमति हेरे प्रष्ट हुन्छ। कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका कुराले पनि उनको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्रष्ट पार्छ।
सिद्धान्तत: पछिल्लो डेढ वर्षदेखि पार्टीमा दुवै अध्यक्ष थिए। तर नेतृत्व ओलीको स्थापित थियो। त्यो बेलाको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले एक ठाउँ भनेका छन्, ‘पार्टी सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गर्ने र सर्कुलरहरूमा पनि दुवै अध्यक्षले गर्ने भन्नेमा पुगियो। त्यसलाई जहाजका दुई पाइलट पनि भनियो। डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र वरीयतामा पनि एक नम्बर हुँदा अर्को अध्यक्षको व्यवहारिक भूमिका नहुने अनुभव भयो।’
प्रचण्डले जोखिम मोल्न चाहेनन्। बरू ओलीसँगै सम्झौता गरेर भविष्यको आफ्नो बाटो सुरक्षित गर्न चाहे। यसका लागि उनले यसपालि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई गुहारेर ओलीसँग भएको लिखित र अलिखित सहमतिको ‘साक्षी’ राखे। आउने महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा आफू पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्न उनले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर ओलीसँग सम्झौता गरेका हुन्।
नेकपाभित्र पनि पूर्व एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै ‘न्यारेटिभ’ जबरजस्त उपस्थित छ।
पूर्व एमालेलाई लाग्छ— हामीले यति दुःख गरेर, यति लामो र मूलतः शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेर बनाएको पार्टी हो एमाले। यसको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता स्थापित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एमालेलाई सहजै स्वीकार्छ। आजका दिनमा, मुलुकभित्र अरू पार्टीभन्दा ठूलो जनमत छ। आफूहरूसँग चुनावमा नमिलेर एक्लै लडेको भए माओवादी ढिलो-चाँडो संसदीय राजनीतिबाट ‘पत्तासाफ’ हुने थियो। त्यसैले एमालेको मूल भंगालोमा माओवादी मिसिएर नेकपा बनेपछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने हक स्वतः पूर्व एमाले नेताहरूको छ। यति ठूलो पार्टी पूर्व माओवादीको नेतृत्वलाई सुम्पिन सकिन्न।
अर्कातिर पूर्व माओवादीलाई पनि लाग्छ— हामीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको भए एमालेको बहुमत कहाँ आउथ्यो! उसको जनमत बढेको हाम्रा कारण पनि हो। चुनाव सकिएपछि पनि हामीलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प थियो। कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउन ‘ब्लयांक चेक’ दिएको थियो। पाएको प्रधानमन्त्री लत्याएर, ठूलो त्याग गरेर प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गरेका हुन्। अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पनि नदिने, पार्टी अध्यक्ष पनि नदिने? प्रचण्डलाई नेता मान्न नसक्ने भए पार्टी एकता किन गरेको?
चुनौती यी प्रतिस्पर्धी ‘न्यारेटिभ’लाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने हो।
अहिलेलाई, ‘लेट्स फिल पोजेटिभ!’